WWE Alatsinainy Alina RAW Preview: 29 Janoary 2018 - Wwe
WWE Alatsinainy Alina RAW Preview: 29 Janoary 2018
Rusev Rumble natolotra ary ahoana. Avy amin'ny voatendry tsy hiankina amin'ny antenaina, WWE dia nanao asa nahagaga tamin'ny famandrihana ny efatra lehibe voalohany tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny fahatanterahana.
Na eo aza ny familiana mafy ny karatra amin'ny alàlan'ny fametrahana ny lalao Royal Rumble an'ny vehivavy amin'ny hetsika lehibe alohan'ny fifanintsanana ho an'ny lehilahy, ny fandraisana ankapobeny ny seho dia tsara tamin'ny lafiny rehetra.
Tsy tranga isan'andro fa tsy iray, fa superstar Japenese roa / zazavavy indie no mandresy ny praiminisitra malaza amin'ny fampisehoana Immortals. Manampia nostalgia be loatra miaraka amina hetsika avo lenta ao anaty peratra ary azonao antoka fa hahazo Rumble mandritra ny taona ianao.
maninona aho no te irery foana
Ny haingam-pandeha namarana ny seho dia nitondra anjara biriky tamin'ny vanim-potoana sy rivotra manjavozavo mankamin'ny fahalavoana amin'ny Alatsinainy alina Raw. Mety nikapoka ilay toerana mamy ilay Rumble saingy mety ho marikivy daholo izany raha tsy mandeha manao ny asany ny WWE anio hariva.
Ireto teboka firesahana dimy ireto dia hampisy na handrava ilay seho izay afaka mahita ireo masomboly nambolena ho an'ny lalao Elimination Chambres marobe.
# 5 Ny fiadiana ny tompondakan'i Miztinental
Ho gaga ianao rehefa misaintsaina ny haavon'ny fandrosoana nataon'i Miz nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay. Hatramin'ny nandraisany ny tsindry alohan'ny fahamatorana izay nandrahona ny hametaka ny asany, hivadika ho iray amin'ireo lafin-javatra misy ifandraisany indrindra amin'ny fahitalavitra WWE, ny Miz dia nanaporofo fa diso avokoa ny mpomba azy.
Hidina izy ho iray amin'ireo tompondakan'ny IC lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra, saingy tandindomin-doza tokoa ny fanjakany amin'ny famaranana eo am-pelatanan'ny lehilahy izay natao kristiana ho endrik'ilay orinasa mandroso, Roman Reigns. Raha kasaina handroaka an'i Brock Lesnar ho tompon-daka eran'izao tontolo izao ao amin'ny WrestleMania 34 i Reigns, manantena ny WWE hanana toko farany eo anelanelan'ny Big Dog sy ny A-lister alohan'ny hahatongavan'ny Chambre Elimination.
Ny Big Dog dia tsy izy irery no nibanjina ny masony tamin'ny tadin'ny IC satria ny karatra afovoany ambony mahery amin'ny marika mena dia hafana eo am-pelatanan'ilay tompon-daka be mpitia.
Ny lalana mankany WrestleMania dia tsy ho mora amin'ny Miz, fa antoka izany.
famantarana ny fampiasan'ny namana
ny fomba firesahana taratasim-pitiavana
maninona izy no tezitra amiko tsy misy antony
Toetra 100 an'ny namana tsara
afaka mifankatia aminao ve ny lehilahy manambady?